कति हुँदैछ प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको तलब–भत्ता ? – Online National Network
कति हुँदैछ प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको तलब–भत्ता ?
काठमाडौं, १४ भदौ – सरकारले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब–भत्ता ऐनमार्फत व्यवस्था गर्न लागेको छ । संसद्को विधायन समितिको उपसमितिले यसमाथि छलफल गरिरहेको छ । विधायन समिति सभापति गंगा चौधरीले छलफल अन्तिम चरणमा रहेको बताइन् ।
समितिले पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा सम्बन्धमा सरकारले तयार पारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ ।
विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशको तलब ७३ हजार ६ सय प्रस्ताव गरिएको छ भने न्यायाधीशहरुको तलब ६० हजार ९ सय ७० छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश दुवैको विशेष भत्ता १ हजार छ भने प्रधानन्यायाधीशले सरकारी आवास पाउने छन् । न्यायधीशलाई भने २५ हजार ६० रुपैयाँ दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त लत्ताकपडा, बिजुली, धारा, पानीबापतको सुविधा पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले पाउने छन् ।- नयाँ पत्रिका दैनिक